Omume Email kacha mma: Gịnị bụ IP Warming? | Martech Zone
Wenezdee, Machị 25, 2020 Tọzdee, Machị 26, 2020 Douglas Karr
Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị na-ezipụ ọtụtụ narị puku ozi ịntanetị kwa ụbọchị, ịnwere ike ịbanye na nsogbu ụfọdụ dị mkpa na ndị na-ahụ maka ịntanetị na-ebugharị ozi ịntanetị gị niile na folda junk. ESP na-ekwukarị na ha zipụ ozi email ma na-ekwukarị banyere ịdị elu ha nnyefe nnyefe, ma nke ahụ gụnyere ịnyefe ozi email na junk nchekwa. Iji n'ezie ịhụ gị nnyefe mbata, ị ga-ahu nagide a-atọ ndị ọzọ n'elu ikpo okwu dị ka anyị mmekọ na 250ok.
Ihe nkesa ọ bụla nke na-eziga email nwere adreesị IP metụtara ya, ndị ISP na-ejikwa akwụkwọ ndekọ aha nke adreesị IP ndị a na ole bounce na mkpesa spam ha natara n'aka ndị ọrụ ha na ozi email ezitere site na adreesị IP ndị ahụ. Ọ bụghị ihe ọhụrụ nye ụfọdụ ndị ISP iji nweta mkpesa ole na ole wee zigara ozi ịntanetị niile ọzọ na folda junk karịa igbe igbe.
Na-akwaga na New Email Service Provider
Ezie na gị debanyere aha ndepụta nwere ike ịbụ 100% ziri ezi email debanyere aha bụ ndị opted na, ma ọ bụ abụọ opted na, gị ahịa ozi ịntanetị… migrating a ọhụrụ na-eweta ọrụ email na-eziga gị dum ndepụta nwere ike ịkọwapụta mbibi. Mkpesa ole na ole nwere ike ịnweta adreesị IP gị ozugbo ma ọ nweghị onye ga-enweta email gị na igbe mbata ha.
Dịka usoro kachasị mma, mgbe ndị buru ibu na-akwaga na onye na-eweta ọrụ email ọhụrụ, ọ na-atụ aro ka adreesị IP ahụ bụrụ kpoo ahụ ọkụ. Nke ahụ bụ, ị na-ejigide onye na-ahụ maka ọrụ email gị dị ebe ị na-amụba ọnụ ọgụgụ nke ozi ị na-eziga site na ọrụ ọhụrụ… ruo mgbe ị wuru aha maka adreesị IP ọhụrụ ahụ. N'ime oge, ị nwere ike ịkwaga ozi gị niile mana ị chọghị ime ya n'otu oge.
Email Marketing: Gini bu Okpomoku IP?
Dị nnọọ ka ikpo ọkụ na-eji nwayọ nwayọ na-arụ ọrụ ike iji kpoo ahụ ike ma belata ihe egwu nke mmerụ ahụ, okpomoku IP bụ usoro nke ịhazi usoro mgbasa ozi kwa izu na adreesị IP ọhụrụ ahụ. Ime nke a ga - enyere aka n’inwe aha izizi dị mma na ndị na - eweta ọrụ ịntanetị (ISPs).
Igwe IP na-ekpo ọkụ Smart: Thezọ mbido nke nnyefe Email
Okpomoku IP Okpomoku
Ihe omuma ihe a sitere na Uplers na-akowa ma gosiputa omume kacha mma na-eme ka adreesị IP gị dị mma gị na onye na - eweta ọrụ email ọhụrụ gị, na - ejegharị gị site na usoro usoro 5:
Gbalia ihu na ị gbasoro omume kacha mma nke email tupu izipu izipu ozi ịntanetị nke izizi IP.
IP gị raara onwe ya nye kwesịrị inwe ndekọ pointer melite na DNS gị (DNS).
Ekekọrịta ndị debanyere aha email dabere na njikọ aka ha na ozi ịntanetị gara aga.
Isi ihe na-eme ka okpomoku IP na-aga nke ọma na-eji nwayọ na-abawanye ọnụ ọgụgụ nke ozi ịntanetị ị zigara.
Mebe nsonaazụ nzipu ozi.
Ha na-egosiputa ụfọdụ ndị ọzọ na ụfọdụ ndị na-eweta ọrụ ịntanetị (ISPS):
Yahoo, AOL, na Gmail na-ewetara ụfọdụ nsogbu nsogbu site na ịkekọrịta ozi ịntanetị n'ime ọtụtụ pụrụ iche, si otú ahụ na-egbu oge nnyefe email. Ọ ga-egbo ozugbo ị zigara ụfọdụ ozi ịntanetị na ziri ezi metrics.
Igbu oge dị nkịtị na AOL, Microsoft, na Comcast. Oge igbu oge a ma ọ bụ bounces 421 ga-anwale kwa elekere 72. Ọ bụrụ na enweghị ike ịnyefe ya mgbe oge ahụ gasịrị, ha ga-agbagha dị ka 5XX na ndekọ ibiaghachi ga-echekwa dị ka njehie 421. Ozugbo aha gị malitere, ọ gaghị enwe oge igbu oge ọ bụla.
Tags: AOLkeukwuonye na-enye ọrụ emailGmailonye na-ahụ maka ịntanetịikpo ọkụispụlọ ọrụyahoo